Mpanamboatra mpiaro kidoro - Mpamatsy mpiaro kidoro China, orinasa
Fitaovana: landihazo 100% vita amin'ny TPU TTL: 130GSM. Loko: fotsy / manga / mavokely / volomparasy na namboarina ho takiana aminao. Fonosana: carelabel, karatra fampidirana, tabilao fisaronana, sticker, polybad, baoritra.
100% Cotton Kenyana Topper kidoro
Nasongadinay hatrany ny kalitao. Ary manana rafitra andian-dahatsoratra ahafahantsika miantoka ny kalitaony. Manana dingana dimy izahay mandritra ny dingana ao anatin'izany ny fitaovana, fanjairana, vokatra tapitra, vita, fonosana ary en-trucking. Isaky ny dingana manana QC hifehy ny kalitao izahay. Raha ny momba ny vokatra tsy mendrika, dia hamboarinay izy ireo mandra-pahalalan'izy ireo. Afaka manome toky izahay fa afaka manolotra vokatra avo lenta sy serivisy tsara indrindra ho anao.
100% Polyester Micro Plush Waterproof Matras Encasement
Vokatra: 100% Polyester Micro Plush Waterproof Matras Encasement
Lamba: 100% Polyester 145gsm voaravaka terry kely + 40gsm TPU
Fanamarihana: 1.Zipper akaiky amin'ny habe 3, lafiny roa 2 ary lafiny 1 fohy. 2. Amin'ny akaiky kokoa ny velcro Flap.
Tombony misaron-kidoro: mandà feo, mandà vovoka, arovy ny kidoro, arovy ny hoditrao, mety ho an'ny be antitra, ankizy, biby fiompin'ny fianakaviana ampiasaina. Mety kokoa amin'ny hotely, fampiasana fandriana hopitaly
Fitaovana: lamba 100% Polyester Terry miaraka amin'ny TPU. Vanim-potoana: lohataona / fahavaratra / fararano / ririnina. Fonosana: carelabel, karatra fampidirana, tabilao fisaronana, sticker, polybad, baoritra. Fitaovana: lamba 100% Polyester 95gsm Terry miaraka amin'ny TPU 35gsm.
70GSM Microfiber + 70GSM mameno + 40GSM tsy tenona. Kitapo PVC misy karatra fampidirana miloko sy baoritra, na toy ny fangatahanao. 1pc / kitapo. 100 pcs / stock stock miaraka amin'ny habe mifangaro, 500 set / loko manokana misy habe mifangaro, tongasoa santionany tongasoa.
Mpiaro kidoro tsy misy rano
100% tsy tantera-drano - Fiarovana ambony amin'ny hatsembohana, lena amin'ny fandriana, ranon-javatra sy tasy; Fiantohana kalitao 10 taona (NAOTY: Ho fiarovana enina sisiny). Hypoallergenic - Manakana ny vovo-vovoka, ny tsiranoka, ny bakteria, ny holatra ary ny bobongolo - Ho an'ny fanamaivanana ny allergy farany.